Federal mutongi anomisa United Airlines COVID-19 mvumo yekudzivirira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Federal mutongi anomisa United Airlines COVID-19 mvumo yekudzivirira
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Federal mutongi anomisa United Airlines COVID-19 mvumo yekudzivirira.
Mutongi akaraira kurambidzwa kwechinguva kuUnited Airlines, ichidzivirira kambani iyi kumisikidza vachengeti ve COVID-19 mvumo yekudzivirira vashandi uye nekuisa vashandi vakakumbira kusunungurwa pazororo risina kubhadharwa.
Mutongi wedunhu reUS Mark Pittman akapindura chiitiko chekirasi chakaunzwa nemumhan'ari uye kaputeni weUnited Airlines David Sambrano, mugari weNorth Texas.
Pittman akaraira kurambidzwa kwechinguva kuUnited Airlines, ichidzivirira kambani kumanikidza vashandi vayo.
Gavhuna weTexas Greg Abbott akaburitsa mutemo wekurambidza chero chinzvimbo muTexas kubva pakaraira majekiseni eCovid-19 evashandi kana vatengi.
Mutongi wedunhu reUS Mark Pittman akapindura kumatare edzimhosva kupokana neUnited Airlines yakamisikidzwa nevashandi vatanhatu vendege nekuraira mutakuri kuti amise kwechimbichimbi mvumo yekudzivirira COVID-19 iyo yaizoisa vashandi vasina kubaiwa pazororo risina kubhadharwa.
Pittman akaburitsa odha yake achipindura chiitiko chekirasi chakaunzwa nemumhan'ari uye United Airlines kaputeni David Sambrano, anogara kuNorth Texas.
Sambrano aive mumwe wevashandi vatanhatu vakamhan'ara kumatare edzimhosva vachipokana kuti paive nemuitiro werusarura paChicago nendege; vanga "vakumbira pekugara pakunamata kana pakurapwa kubva kubumbiro reUnited kuti vashandi vayo vapiwe mushonga weCCVID-19."
Mutongi akaraira kurambidzwa kwenguva pfupi United Airlines, kudzivirira kambani kubva mukumanikidza yayo COVID-19 mvumo yekudzivirira kune vashandi uye kuisa vashandi vakakumbira kusunungurwa pazororo risina kubhadharwa. Kurambidzwa kunopera musi waGumiguru 26. Inopa mutongi nguva yekunzwa nharo dzakakodzera dzevashandi pamwe nendege.
Vashandi, avo vakanyorera chichemo chavo musi waGunyana 21, vakapokana kuti kuisa vashandi pazororo risina kubhadharwa haisi nzvimbo yekugara inonzwisisika, asi "chiito chakaipa chevashandi" uye nekudaro zvinoumba rusarura.
Sambrano pachake akanyorera kuregererwa kwekurapa, apora kubva kuCOVID-19. Anoti chikumbiro chake chakarambwa nehurongwa hweUnited online pekugara.
United Airlines yakazivisa muna Nyamavhuvhu 6 kuti zvaizoda kuti vese 67,000 yevashandi vayo vemuUS vawane jabhu. Panguva yekuziviswa kwayo, nendege yakaratidza dzakatenderedza 90% yevatyairi uye makumi masere muzana evashandi veendege vatove nemishonga. Yakati iyo vashoma vashandi vanoramba mushonga uyu vanozoiswa pazororo risina kubhadharwa.
Ndege inoti "iri kuita basa rakanaka rekutarisira kuchengetedza kuchengetedzeka pabasa uye nekupa pekugara zvine hungwaru pakatarisana nemamiriro ezvinhu akange asati amboitika uye ari kuchinja nekukurumidza" uye yakange yakumikidza chikumbiro chekuti nyaya iyi ibviswe.
Zvichakadaro, Texas gavhuna Greg Abbott yakapa chirevo chepamusoro chinorambidza chero chinzvimbo muTexas, kusanganisira vega mabhizinesi, kubva pakuraira majekiseni eCOVID-19 evashandi kana vatengi.